नेप्सेमा दोहोरो अंकको वृद्धिः ३ घण्टाको अवधिमा ६६ करोडको कारोबार - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, वैशाख ८ । आइतबार ३ घण्टाको कारोबार अवधिमा रू. ६६ करोड २२ लाखको शेयर खरीद विक्री भएको छ ।
सो अवधिमा नेप्से परिसूचक १ हजार २४४.०३ विन्दुमा पुगेको छ । ३ घण्टामा परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा ११ अंकले बढेको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको प्रतिकित्ता रू. ३१४ मा रू. ११ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । सो अवधिमा १६३ कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस १ बजेको अपडेटः नेप्से कारोबारमा ०.६५ प्रतिशतले बढ्यो